Jananinepal.comरोचक Archives - Page 99 of 100 - Jananinepal.com
ओठबारे केहि रोचक तथ्यहरु एक पटक जान्नै पर्ने !!!
ओठ मानव शरीरका अंगहरु मध्ये सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । सौन्दर्यको हिसाबले ओठ निकै महत्वपुर्ण भुखिका हुनुका साथै स।बेदनशिल हुन्छ। सौन्दर्यमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने ओठ व्यक्तिअनुसार विभिन्न आकारका हुन्छन् । तर, ओठबारे कैयौँ तथ्य छन्, जुन तपाईं अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । -ओठमा कहिल्यै पसिना आउँदैन, किनभने पसिना ग्रन्थि नै हुँदैन । ओठमा डन्डिफोर पनि आउँदैन। […]
विश्वमा भएका यौन सम्बन्धि अनौठो पाँच अध्ययन !!!
तथ्यले नै बताउँछकी दुनियामा सबैभन्दा धेरै बिक्ने चिज भनेकै यौन र अपराधको विषय हो । सायद त्यहीँ बिकाउ चिज भएर होला दुनियामा यौनका विषयलाई लिएर अनगिन्ती अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ती मध्ये कतिपय केवल प्रचार बाजीका लागि मात्र समेत हुने गरेका छन् । कतिपय अध्ययन र त्यसका निष्कर्ष त सुन्दैमा हाँसो उठ्ने खालका हुन्छन् । विश्वमा […]
योनीरसबाट बियर उत्पादन !!!
योनीरसबाट बियर बन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, पोल्याण्डको एक बियर कम्पनीले यस प्रकारको बियर उत्पादन गर्न थालेको छ । द अर्डर अफ योनी नाम गरेको बियर कम्पनीले यसलाई बजारमा ल्याएको हो । यस योनी बियरमा महिलाको योनीमा पाइने ल्यास्टिक अम्ल पाइन्छ । यसमा दुई हट मोडलहरु मोनिका र पाउलिनाको योनीको ब्याक्टेरिया प्रयोग […]
सावधान, चुम्बन गर्दा ब्याक्टेरिया उपहार पाइएला !
धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि चुम्बन गर्दा ब्याक्टेरियाको एउटा ठूलो समुह शरणार्थी बनेर दोस्रो व्यक्तिको मुखभित्र प्रवेश गर्छ भन्ने । तर वैज्ञानिकहरूले १० सेकेण्डको एक चुम्बनमा आठ करोड ब्याक्टेरिया एक अर्काको मुखमा ओहोर–दोहोर गर्ने तथ्य फेला पारेका छन् । यो कुनै अनुमान होइन, नेदरल्याण्डका वैज्ञानिकको एक समूहले पत्ता लगाएको तथ्य हो । वैज्ञानिकहरुको एक समूहले २१ जोडीको […]
शरीरमा हुने कोठीको फल !!!
ज्योतिषमा सुभ अशुभका बताउने धेरै प्रकारको विधि छ। शरीरमा भएका दाग कोठीले पनि सुभ असुभको संकेत गर्दछ। ज्योतिष ग्रन्थ सामुन्द्रिक रहस्यमा शरीरमा भएको कोठी तिलले पनि सुभ असुभ फलको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। शरीरमा हुने गरेका चिन्हले पनि भविष्य तथा मनुष्यको चरित्रलाइ दर्शाउँछ। हर पुरुष अथवा नारीको कुनै न कुनै अंगमा कोठी हुन्छ नै। के […]
वीर्यमा रहने शुक्रकीट सम्बन्धी ९ तथ्य !!!
वीर्यमा रहने शुक्रकीट (स्पर्म) बारे अधिकांशलाई धेरै कुरा थाहा होला। तर, शुक्रकीटबारे केही यस्ता तथ्य छन् जुन सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। हेरौँ शुक्रकीट सम्बन्धी यी ९ तथ्यः १– एउटा मानिसका शुक्रकीट मध्ये ५० प्रतिशत मात्र सिधा अगाडि तैरन्छन वा अघि बढ्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आधा मात्र सक्रिय हुन्छन्। केही शुक्रकीट गोलाकार तैरिन्छन् भने केही वीर्यको […]
तीज, ब्रत र सेक्स , यस्तो भन्छ शास्त्र !!!
कुनै शुभकार्यका लागि ब्रत बसेका महिलाले ब्रत तोडेको रात सहवास गर्न हुन्छ कि हुँ दैन धर्मशास्त्र र चिकित्सा शास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ फरक-फरक दिइएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा मन भगवानमा मात्र लगाउन गरिने उपवासका बेला भोजन र यौन दुबै सोच्नै नहुने विषय हुन् । चिकित्सा शास्त्रले भने धर्मशास्त्रले जस्तो कडाइ गरेको छैन। शास्त्रले के भन्छ हिन्दूशास्त्र […]
विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली दश महिला इन्जिनियरहरु हेर्नुहोस् !!!
भनिन्छ STEM सेक्टरमा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ । स्टेम अर्थात् Science, Technology, Engineering र Mathematics । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कम भएको पक्कै हो । तर यहीँ क्षेत्रमा केही त्यस्ता शक्तिशाली महिलाहरु पनि छन् जो यस समग्र विश्वका लागि रोल मोडल मात्र बनिरहेका छैनन् आज करोडौँ मानिसले दिनहुँ प्रयोग गर्ने प्रविधिको […]
आफ्नै ४ सय ७० लीटर दूध दान गर्ने महिला !!!
नयाँ आमाका लागि स्तनपान चुनौती भन्दा कम होइन । उनीहरुका लागि त्यो अत्यन्तै कष्टको विषय बन्ने गरेको छ । केही आमाको आवश्यकता भन्दा कम दूध मात्रै आउछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई मिल्क बैंकको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर कोही आमाको यती धेरै दूध आउछ कि उनीहरुलाई दान नै गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । क्यालिफोर्नियामा बस्दै […]
सबै भन्दा लामो नङ्ग भएका श्रीधरले ६६ वर्ष पछि नङ्ग काटेपछि !!!
एउटा हातमा सबै भन्दा लामो नङ्ग पालेर रेकर्ड राखेका श्रीधर चिलालले ६६ वर्ष पछि नङ्ग काटेका छन् l उनको नङ्ग को एकमुस्ट लम्बाई ९०९.६ से. मि. रहेको थियो l ८२ बर्षीय श्रीधर ले १९५२ देखि अहिले सम्म बाया हात मा नङ्ग पालेका थिए l श्रीधर पहिलो पटक १९७९ मा गिनिज बुक मा देखिएका थिए जति […]